Mpivarotr’anana, mitaiza kely Nisy namono tamin’ny fomba feno habibiana
Renim-pianakaviana iray, manan-janaka kely mbola minono no nisy namono tao ambadiky ny toerana filalaovam-baolina amoron-dranomasina ao Analalava ny alin’ny alatsinainy 6 janoary lasa teo tokony ho tamin’ny 8ora alina.
Tamin’io fotoana nahitan’ny fokonolona azy io dia mbola nisy aina ilay renim-pianakaviana saingy efa tsy nahateny intsony. Nentin’ny mponina namonjy toeram-pitsaboana avy hatrany ny tenany saingy tsy tana intsony ny ainy hoy ireo mpitsabo nandray an-tanana azy tao aorian’izay. Ireto farany izay nanao ny fizahana kosa no nilaza fa voavono tamin’ny fomba feno habibiana ity reny ity. Raha ny nambaran’izy ireo mantsy dia tombanana ho nokapohina mafy teo amin’ny hatoka sy ny lohany ity renim-pianakaviana ity. Nambaran’ireo mpitsabo ihany koa fa nisy ratra tao amin’ny fivaviany. Araka ny fantatra anefa dia mpivarotra anana no asan’ity renim-pianakaviana ity. Mbola mitaiza kely sy mampinono ihany koa izy raha ny fantatra. Efa nalevina any amin’ny fasan-drazany any amin’ny fokontanin’ Andronjana kaomina Ambolobozo distrikan'i Analalava moa ny razana. Tsy mbola fantatra mihitsy kosa izay nahavanona izao loza mahatsiravina tany amoron-dranomasin’Analalava izao raha ny tatitra avy ao an-toerana ihany ka manao antso avo amin’ny tompon’andraiki-pilaminana ireo mponina.